महरा पुत्रलाई आइलाग्यो अर्को आपत, छानविनमा तानिए::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं– यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पुपक्र्षका लागि थुनामा छन् । दुव्र्यवहारको आरोप उनलाई निकै महँगो सावित भयो । उनले सभामुख पद मात्र गुमाएनन् एक महिना प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्यो ।
३० वर्षपहिलेदेखि चिनजानकी एक महिलाका कारण उनको राजनीतिक ‘करिअर’ लगभग समाप्त भयो । संसद सचिवालयमै नर्सका रुपमा कार्यरत रोशनी शाही यी सबै घटनाकी कारण थिइन् ।
यसमा महरा मात्र नभई उनको परिवारको समेत गल्ती रहेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन । महरा र रोशनीको सम्बन्धबारे माओवादीका धेरै नेतालाई थाहा थियो । उनको परिवारलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
पछिल्लो समय महरा र रोशनीको विवाद बढेको थियो । त्यसो त महराकी श्रीमती सीता र छोरा निर्मललाई जानकारी थियो । रोशनीले आफ्नो पदस्थापन काठमाडौंमै गरिदिन लगायत विभिन्न माग राखेकी थिइन् ।
त्यसपछि महरापत्नी र निर्मलले रोशनीलाई धम्काएको स्रोत बताउँछ । असोज १२ गते सम्झाउन समेत भनेर महरा रोशनीको डेरामा गएका थिए । त्यहाँ दुवै जनाबीच कुटाकुट भएको थियो । त्यही कारण उनी मिडियामा गएकी थिइन् ।
तेस्रो दिन नै उनले बोली फेरिकी थिइन् । तर, महरा निकट व्यक्तिहरुबाट उनलाई धम्की दिइएको थियो । त्यही कारण उनले महराविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार महरा पुत्र निर्मलले रोशनीलाई पटक–पटक धम्कीपूर्ण एसएमएस र फोन गरेका थिए । त्यो खुलेपछि प्रहरीले निर्मलसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो । उनको मोबाइलसमेत परीक्षणका लागि मागेको थियो । तर, आफ्नो कुनै कुरा नै नभएको भन्दै उनले प्रहरीलाई दिन मानेनन् । सर्वसाधरण भएको भए प्रहरीले उनलाई समेत थुनामा राख्न सक्ने अवस्था थियो । तर, प्रहरीले उनको मोबाइलसमेत झिकाउने प्रयास गरेन ।
त्यस्तै महराले रोशनीलाई पटक पटक एसएमएस पठाएका थिए । त्यो मोबाइल समेत बरामद गर्न नसक्दा प्रहरी अनुसन्धान कमजोर बनेको छ । महरा पत्नीले उक्त मोवाइल फुटाइदिएको बयान दिएकी छन् ।
शुक्रबार र शनिवार सातदोवाटो–कोटेश्वर सडकमा सवारी चलाउन नपाइने, के हाे कारण ?
देशभर बढ्यो चिसो, कति पुग्यो तापक्रम ?